ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ အပြင် ညဘက်မှာလည်း ကင်းစောင့် တာတွေ ပါ လုပ်နေတဲ့ သူထူးစံ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ အပြင် ညဘက်မှာလည်း ကင်းစောင့် တာတွေ ပါ လုပ်နေတဲ့ သူထူးစံ
ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ အပြင် ညဘက်မှာလည်း ကင်းစောင့် တာတွေ ပါ လုပ်နေတဲ့ သူထူးစံ
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်အနုပညာလောကမှာ အနုအရွဇာတ်ရုပ်တွေ အပြင် အကြမ်း အ ရမ်းတွေမှာ လည်း ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေး ချစ် ခင် မှုတွေရရှိထားကာ အောင်မြင်စွာရပ်တည်နေ သူကတော့ သူထူးစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ သူထူးစံကတော့ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြည် သူတွေ နဲ့အတူ လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေပြီး အားကြိုး မာန်တတ်နဲ့ တစ်ဖက်တစ် လမ်း ကနေ ရပ်တည်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားဖြည့် လုပ်ဆောင်နေသလို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေ ကတည်းက ဒါရိုက်တာ ဂျိုး နဲ့အတူ ရပ်ကွက်ကင်းစောင့်တာဝန်ယူတွေယူခဲ့ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် တက်နိုင် တဲ့ ဘက်ကနေ ပါဝင်ခဲ့တာတွေ့ရပါ တယ်..။ သူထူးစံ ကတော့လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကာ ပြည်သူတွေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ လှုပ် ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာမမျှဝေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားနားလည် မှု လွဲတာတွေရှိခဲ့ပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်နေသူပဲ ဖြစ် ပါတယ်..။
“ကိုသူထူးစံပြည်သူနဲ့ အတူထာဝရရှိနေပါတယ်ရှင့် Thu Htoo San. .” ဆိုပြီး တော်လှန်ရေး တိုက် ပွဲ ကြီးမှာအတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကိုသရုပ်ဆောင် နွေး ယမင်းဦးထွေးက ပြန်လည်မျှဝေ ထားတာပါ..။ ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးစကားလေးတွေပြောထားကြသလို ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရှေ့ ထွက်ကာ လမ်းပေါ်လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်နေကြတာတွေကို ချီးကျူး အားပေးထား ကြ တာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. သ႐ုပ္ေဆာင္အႏုပညာေလာကမွာ အႏုအ႐ြဇာတ္႐ုပ္ေတြ အျပင္ အၾကမ္း အ ရမ္းေတြမွာ လည္း ပီျပင္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းမႈေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပး ခ်စ္ ခင္ မႈေတြရရွိထားကာ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ေန သူကေတာ့ သူထူးစံပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ သူထူးစံကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့လက္ရွိအေျခအေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ျပည္ သူေတြ နဲ႔အတူ လူထုလႈပ္ ရွားမႈေတြျပဳလုပ္ေနၿပီး အားႀကိဳး မာန္တတ္နဲ႔ တစ္ဖက္တစ္ လမ္း ကေန ရပ္တည္ေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာအားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္ေနသလို ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေတြ ကတည္းက ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ိဳး နဲ႔အတူ ရပ္ကြက္ကင္းေစာင့္တာဝန္ယူေတြယူခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕လုံၿခဳံေရးအတြက္ တက္ႏိုင္ တဲ့ ဘက္ကေန ပါဝင္ခဲ့တာေတြ႕ရပါ တယ္..။ သူထူးစံ ကေတာ့လမ္းေပၚထြက္လႈပ္ရွားမႈေတြျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူေတြနဲ႔ရပ္တည္ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ လႈပ္ ရွားမႈပုံရိပ္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာမမွ်ေဝခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြၾကားနားလည္ မႈ လြဲတာေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ေနသူပဲ ျဖစ္ ပါတယ္..။
“ကိုသူထူးစံျပည္သူနဲ႔ အတူထာဝရရွိေနပါတယ္ရွင့္ Thu Htoo San. .” ဆိုၿပီး ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ ပြဲ ႀကီးမွာအတူပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ သူမတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ေႏြး ယမင္းဦးေထြးက ျပန္လည္မွ်ေဝ ထားတာပါ..။ ပရိသတ္ေတြကလည္း အားေပးစကားေလးေတြေျပာထားၾကသလို ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ေရွ႕ ထြက္ကာ လမ္းေပၚလူထု လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ေနၾကတာေတြကို ခ်ီးက်ဴး အားေပးထား ၾက တာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္..။
Previous post မုံရွာမြို့ မှာ မြန်မာ ဘီယာ နဲ့ ခြေဆေးခဲ့ ကြတဲ့ အကြောင်း အရင်း
Next post ပြည်သူ လူထု နဲ့ အတူ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်း ဖြိုခွင်း ခံလိုက်ရတဲ့ အထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ခေးဆက်သွင် ရဲ့ ဗီဒီယို